आफुलाई एक्लो महशुस गरिरहनुभएको छ भने यसो गर्नुहोस् ? - Sabal Post
आफुलाई एक्लो महशुस गरिरहनुभएको छ भने यसो गर्नुहोस् ?
यो संसारमा जति पनि मान्छेहरु रहेका छन् ति सबै जन्मिदा एक्लै आएका हुन् र अन्तिम समयमा पनि एक्लै नै यो संसार छोडेर जान्छन् । मानिसहरु जन्मिसके पछी एक किसिमले उनिहरुलाई अरुको साथ् पनि मिल्दै जाने गर्छ । तर जब जब जिन्दगी अगाडी बढ्न थाल्दछ तब जीवनमा एक्लै बस्ने वातावरण पनि आफै बनाउदै र मिलाउदै जानु पर्दछ । तर उमेर सानो हुदा भावनात्मक रुपमा उनीहरु अरुमा निर्भर रहने गर्दछन ।
उनीहरुलाई अरुले स्विकारुन, माया गरुन्, आफुलाई सहयोग गरुन्,सम्मान गरुन् भन्ने आशा राख्ने गर्दछन् । तर्र जब उमेर बढ्दै जान्छ यस्ता कुराहरु बाट पनि व्यक्ति टाढिदै जान्छ र उसलाई एक्लो महशुस पनि हुन थाल्दछ ।
कोहि व्यक्तिलाई समुहमा वा साथीभाईहरु संग मात्र हिड्ने बस्ने बानि लागेको हुन्छ । तर यदि परिस्थिति बस उनीहरु छुटिनु पर्यो भने व्यक्तिले आफुलाई मन बाटै एक्लो महशुस गर्न थाल्दछ र मानसिक रुपमा पनि ऊ कमजोर हुने गर्दछ । कतिपयहरु बाट त झन् अप्रिय घटना पनि घट्ने गर्दछ । त्यसैले यस्ता कुराहरुको समाधान के छ त ? यदि एक्लो महशुस भएको छ भने के गर्ने भन्नेबारे आज हामी यहा चर्चा गर्नेछौ ।
आफुलाई एक्लो महशुस गरिरहनुभएको छ भने के गर्ने त ?
जिन्दगी भनेको एउटा निरन्तर चलिरहने यात्रा हो । यो यात्रामा कति मान्छेहरु तपाईको जीवनमा भेटिन्छन र छुटिन्छन । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो के कुरा याद गर्नुहोस भने, यो संसारमा आफ्नो भन्ने कोहि पनि हुदैन, यो कुरा स्वीकार्नुहोस कि तपाइँ एक्लो नै हुनुन्छ ।
जसलाई तपाइँ आफ्नो ठानीरहनु भएको छ । जुन साथीहरु संग तपाई छुटिएर बस्न पनि सक्नुहुन्न एकदिन ति सबैबाट तपाइँ टाढा हुनुनै पर्छ । तिनीहरुले जतिबेला पनि तपाईको साथ् छोड्न सक्छन । जिन्दगीको यात्रामा चल्न सिक्नुहोस । बीच बाटोमै अल्झिएर नबस्नुहोस् ।
जीवनमा यदी तपाईले क्केही कुरा प्राप्त गर्नुभयो भने त्यसलाई आफ्नो लक्ष्य नबनाउनु । तिमि जे बन्न चाहन्छौ त्यसलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउनु । यो समय फर्केर आउदैन भन्ने नसोच । किनकि तिम्रो जीवनमा यो समय भन्दा पनि अझ राम्रो समय आउनै बाकि छ ।
आफुले कसैको साथ् पाइन् र अब मा केहि पनि गर्न सक्दिन भन्ने गलत मानसिकता हटाउनुहोस् । किनकि संसारमा जतिपनि मानिहरु सफल भएका छन् तिनीहरु एक्लै नै सफल बहेका छन् ।
यदि तपाइले कसैको साथ् पाइरहनु भएको छैन यो तपाइको लागी आफुलाई प्रमाणित गर्ने एक सुनौलो अवसर हो । यदि तपाई जब एक्लै संघर्ष गर्नेबारे ठान्नुहुन्छ । यसले तपईलाई अझ बढी परिपक्व र आत्मनिर्भर बनाउछ । जब दृढ संकल्पको साथमा अघि बढ्नुहुन्छ तब तपाईलाई बिश्वास नगरेकाले पनि तपाईलाई बिश्वास गर्न थाल्दछन ।
एउटा कुरा सधै याद राख्नु कि मानिसहरु बलिरहेको आगो मात्र तापन मन पराउछन त्यसैले यदि तपाइँ ओसिएर ब्बसं थाल्नुभयो भने तपाइँ ति मानिसहरुको भिडमा नै हराएर जानुहुन्छ । त्यसैले आफुलाई हराउन नदिनको लागी आफुलाई तताउनुहोस । आफुलाई आगो बनाउनुहोस् । अनि मात्र तपाइँ अघि बढ्न सक्नुहुनेछ र एक सफल व्यक्ति बन्नुहुनेछ ।
तपाइको जिन्दगीबाट जो मानिसहरु टाढा भए उनीहरुलाई जान दिनुहोस । यो कुरा स्वीकार्नुहोस कि उनीहरु तपाइको जीवनमा केहि समयको लागी मात्र पाहुना बनेर आएका थिए । छोडेर गएका मानिहरुको बारेमा धेरै सोचेर भावनामा नडुब्नुहोस् ।
भावनामा डुब्न थाल्नुभयो तपाइको जीवन नै डुब्न सक्छ । जानेलाई जान दिनुहोस । जो टाढिएर गए ति व्यक्तिहरु तपाईइको जिन्दगीको लागि आएका होइनन् भनेर बुझ्नुहोस् । सधै आफ्नो दिमागको कुरा मात्र सुन्ने गर्नुहोस । तपाईको जीवनमा अझै धेरै लुकेका रहस्यहरु आउने बाकी छन । बरु त्यसको लागी बाटो बनाउदै जानुहोस ।
समयतालिका बनाएर काम गर्ने गर्नुहोस । आफुलाई व्यस्त राख्ने गर्नुहोस । जब तपाइँ दिमागी रुपले व्यस्त बन्न थाल्नुहुन्छ तब तपाइको व्यक्तित्व बिकास पनि हुन थाल्दछ । तपाइँ अरु भन्दा परिपक्व बन्दै जानुहुनेछ । दिमागमा सकारात्मक कुराहरु मात्र आउने गर्छन र मनबाट डर, त्रास जस्ता कुराहरु पनि हट्दै जान्छन् ।
हरेक दिन पुस्तक वा पत्रपत्रिका पढ्ने बानीको बिकास गर्नुहोस । प्रविधिसंग अपडेट रहनुहोस । नया कुराहरु खोजि खोजि पढ्ने र त्यसबारे जान्ने कोसिस गर्नुहोस । खाली समय छ भने आफुलाई मन पर्ने गीत गाउनुहोस र बेला बेलामा नाच्ने पनि गर्नुहोस । तर आफुलाई खाली भने हुन नदिनुहोस् ।
यदि मन दुखेको छ भने वा रुना मन लागेको छ भने मन खोलेर चिच्याई चिच्याई रुनुहोस । यसले तपाईको मन हल्का हुन्छ । मनमा केहि कुराहरु पनि घुम्स्याएर नाराख्ह्नुहोस । मनमा जे कुरा छ आफ्नो दाजुभाई अथवा दिदिलाइ सुनाउनुहोस ।
आफ्नो परिवार संग बसेर आफ्नो मनमा लागेको कुरा बताउने गर्नुहोस । जो साग पनि खुलेर कुरा गर्ने बानी बसाल्नुहोस । हरेक दिन एक नयन जीवन हो । त्यसैले हरेक दिनालिया खूलेर रमाउने गर्नुहोस । दिमागमा नकारात्मक कुराहरुलाई डेरा जमाउन नदिनुहोस । कसैले नकारात्मक कुरा गर्छ भने उसलिया सकारात्कम तरिकाले प्रेरित गर्नुहोस ।
सधै आफैमा बिश्वास गर्ने गर्नुहोस । कहिल्यै पनि आफ्नो कामको लागी अरुको आशमा बस्ने नगर्नुहोस । भाग्यमा होइन आफ्नो कर्ममा भर पर्नुहोस । भोली पनि एउटा सुनौलो मौका आउने छ । त्यसैले आशावादी रहनुहोस । हरेक दिन एक घण्टा भए पनि सुन्दर र शान्त ठाउमा बस्ने गर्नुहोस । त्यसबेला दिमागमा राम्रा राम्रा कुराहरु मात्र ल्याउनुहोस । सबैलाई सहयोग गर्छु भन्ने भावना जगाउनुहोस ।
यदि तपाई जतिबेला पनि आफ़ुलाई एक्लो महशुस गरिरहनु हुन्छ भने त्यस्ता ब्यक्तिहरु संग गैर भेट्नुहोस जो व्यक्तिहरु एक्लै बस्दा खुसी हुने गर्छन् । उनीहरु बाट तपाइँ प्रेरित पनि बन्नुहुनेछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई भेट्दा तपाइको मनबाट यो कुरा हट्दै जानेछ कि यो संसार एक्लो तपाई मात्र हैन कि अरुपनि हुने गर्छन ।
स्कूल बसको ठक्करबाट बालिकाको ज्यान गयो
नेकपामा लाग्यो तुस , आज पनि हुनसकेन…
तिलोत्तमाको वडा नं. १२ मा पनि सरकारी…
पार्टीको महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ – नेता जोशी
युरोप भ्रमण सकाएर प्रधानमन्त्री ओली आज स्वदेश…